Israel: Tsy misy Palestine, tsy azo avela hiditra ao amin'ny World Tourism Organization (UNWTO)
Home » Travel Associations News » Israel: Tsy misy Palestine, tsy azo avela hiditra ao amin'ny World Tourism Organization (UNWTO)
Septambra 9, 2017
Maro no mieritreritra fa ny fizahan-tany dia zavatra eken'ny Isiraely sy Palestine ary indostrian'ny fandriampahalemana ny fizahan-tany - mety ho diso izy ireo.
Ankoatra ny fanamafisana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO manaraka, fanapahan-kevitra lehibe iray hafa ny fangatahan'ny minisiteran'ny fizahan-tany ny fizahan-tany Palestiniana ho mpikambana feno ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny fizahan-tany. Ny fangatahana ho an'i Palestine dia natolotra tamin'ny taon-dasa ary ny Antenimiera maneran-tany dia tokony hanaiky roa ampahatelony hanaiky an'i Palestina ho firenena vaovao hanatevin-daharana ny fikambanana. Miara-mivory ao Chengdu, Sina ny fivoriambe ankapobeny amin'ny herinandro ambony. Palestine lasa mpikambana feno ao amin'ny UNESCO tamin'ny 2011.
Ny fizahantany dia fantsom-bola manan-danja ho an'i Palestine ary koa Israel. Na izany aza, Israel dia mifehy ankolaka ny fizahan-tany Palestine satria ny sisintany iraisam-pirenena rehetra dia fehezin'ny Fanjakana jiosy. Ny UNWTO "zon'olombelona ho an'ny mpizahatany mandeha" dia tsy mihatra foana raha ny amin'ny fitsidihana an'i Palestine, sy ny fifanarahana amin'ny lalàn'i Israely.
Indraindray i Israel dia nametra fameperana bebe kokoa ny fizahan-tany any Palestine, ao anatin'izany ny tsy famelana ireo mpitsidika tandrefana hiditra ao Israel indray rehefa mijanona ao amin'ny hotely any Palestine.
Na izany aza, ny fiaraha-miasa eo amin'i Palestine sy Israel dia asa iray lehibe ary mahomby, ary ireo fikambanana anisan'izany ny International Institute for Peace Through Tourism sy ny mpanorina azy Louis D'Amore dia niasa tsy an-kiato nandritra ny am-polony taona maro mba hahatonga ny Isiraely sy Palestine hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fizahantany sy ny fandriam-pahalemana. Louis d'Amore dia hanatrika ny fivorian'ny UNWTO General Chengdu amin'ny herinandro ambony.
Ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny Israel dia nilaza fa ny toerana misy an'i Israel dia ny tsy fisian'ny "State Of Palestine", ka noho izany dia tsy azo ekena ho fanjakana ao amin'ny ONU na amin'ireo fikambanana misy azy.
Mazava ho azy fa mahalala ny resaka vola foana i Israel, ary noterena i Taleb Rifai, sekretera jeneraly jordanianina ankehitriny handidy ny hetsiky Palestine. Nandrahona ny fifanakalozan-kevitra sy ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Israeliana: ny fanomezana ho mpikambana Palestiniana ho mpikambana ao amin'ny governemanta dia hitarika amin'ny fanaovana politika kokoa ny fikambanana ary hihena ny famatsiam-bola. Ankoatr'izay, ny fanjakana jiosy dia nanohy ny tsindry nataony tamin'ireo mpikambana mpikambana ao amin'ny UWNTO izay nilaza hoe: "Tsy manantena fiatraikany ratsy amin'ny Israel na ny fitohizan'ny asany izahay ao amin'ny fikambanana - ny fahavoazana andrasana dia ho an'ny fikambanana ihany."
Israel dia nandray ny fepetra ara-diplaomatika rehetra hanakanana ny fangatahana, ”hoy ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Israel tamin'ny Jerusalem Post.
Etazonia dia tsy mpikambana ao amin'ny UNWTO, fa i Israel Israel koa dia nampiditra ny Amerikanina, izay nampitandrina ny Palestiniana fa ny fidiran'izy ireo amin'ny fikambanana dia mety hisy vokany eo amin'ny fifandraisany amin'i Etazonia.
Ny fangatahana ho an'i Palestine dia antenaina hohamarinina, indrindra fa ireo firenena azo itokisana hanohana an'i Isiraely sy hifidy hanohitra ny hetsika - toa an'i Etazonia, Kanada, UKand Australia - dia tsy mpikambana ao amin'ny UNWTO.
Ny fananana an'i Palestine amin'ny maha mpikambana feno azy ao amin'ity vondrom-piarahamonina manerantany ity dia mety ho dingana iray lehibe hirosoana amin'ny fandriam-pahalemana sy hanitarana ny fizahantany izay mahatonga ny faritany noheverina ho tsy dia be mponina sy mahaleo tena kokoa.
Fampandrenesana: Fiovan'ny rivo-doza Irma: malefaka kokoa any Miami, mafy kokoa any Tampa
Mivavaha ho an'ny nosiko. Mamely mafy an'i Kiobà i Irma!